Heerka shaqo la’aanta oo hoos u dhac ku yimid. | Somaliska
Tan iyo markii ugu horeysay ka dib dhibaatada dhakhaalaha ee ku habsatay caalamka ayaa heerka shaqo la'aanta ee Sweden hoos u dhac ku yimid. Dhamaadkii isbuucii la soo dhaafay 221,622 oo qof ayaa shaqo la'aan uga diiwaan gashanayd Hay'ada Shaqada ee Sweden (Arbetsförmedlingen) taas oo muujineysa hoos u dhac dhan 2,765 marka loo bar bar dhigo isbuucii hore. Isbuucii la soo dhaafay xaafiisyada shaqaalaynta ee dalka oo dhan ayaa waxaa soo gaartay 2,511 dalabyo cusub ee shaqaale lagu dalbanayo. Taas oo muujinaysa 319 dalab in ay korortay isbuucii kaas ka horeeyay iyo 6,123 dalab isbuucaan kiisii kale ee sanadkii tagay. Xigasho Hay'ada Shaqaalaynta ee Sweden Arbetsförmedlingen
Tan iyo markii ugu horeysay ka dib dhibaatada dhakhaalaha ee ku habsatay caalamka ayaa heerka shaqo la’aanta ee Sweden hoos u dhac ku yimid. Dhamaadkii isbuucii la soo dhaafay 221,622 oo qof ayaa shaqo la’aan uga diiwaan gashanayd Hay’ada Shaqada ee Sweden (Arbetsförmedlingen) taas oo muujineysa hoos u dhac dhan 2,765 marka loo bar bar dhigo isbuucii hore.
Isbuucii la soo dhaafay xaafiisyada shaqaalaynta ee dalka oo dhan ayaa waxaa soo gaartay 2,511 dalabyo cusub ee shaqaale lagu dalbanayo. Taas oo muujinaysa 319 dalab in ay korortay isbuucii kaas ka horeeyay iyo 6,123 dalab isbuucaan kiisii kale ee sanadkii tagay.
Xigasho Hay’ada Shaqaalaynta ee Sweden Arbetsförmedlingen